LSS Assistans, caawimo, taageero iyo khibrad xagga
LSS Assistans, caawimo, taageero iyo khibrad xagga sharciyada ah
Marka aad adigu ama qof ku xigaa u baahanyahay caawimo si uu nolol maalmeedka uga dabbaasho, waxanu qabnaa in inuu adiga yahay qofka ugu habboon ee ay tahay inuu go´aan ka gaaro sida iyo waxa lagu caawinayo. Sidaa darteed waxad shirkadda LSS Assisstans, ka helaysaa saamaynta ugu badan ee suurtogalka ah ee ku saabsan caawimada, xannaanada iyo ammaanka aad u qalanto ee aad xaqa u leedahay.
Nolol maalmeed sahlan oo laga helayo LSS Assistans
LSS Assistans waa urur ka jira waddanka dhan oo xafiisyo ku leh Stockholm, Göteborg iyo Malmö, waxananau ka hawlgalnaa Iswiidhan oo dhan. Waxanu ku siinaynaa gacan-qabasho shakhsi ah haddii laxaadkaagu kala dhantaalanyahay, waxananu ku siinaynaa caawimo sharci iyo mid maamul oo bilaash ah oo qusaysa baahidaada LSS, maadaama oo aannu ku baraarugsannahay in hawlaha xagga sharciga ama xidhiidhka hay´adaha dawladda loo arki karo wax dhib badan oo wakhti badan u baahan.
Waxanu shaqaalaha ku raadinaynaa oo kuugu qoraynnaa oo wax u baraynnaa si waafaqsan baahidaada shakhsiga ah. Waxanu aamminsannahay doorashadaada xorta ah, waxananu ku kalsoonnahay kartidaada ah in aad maamusho gacan-qabashadaada shakhsiga ah, waxanu aragnaa faa´iidooyin badan oo ku jira in macaamiishayadu ay u doortaan xigtadooda/qoyskooda shaqaale ahaan.
LSS Assistans waxad mar walba ka helaysaa caawimo sharci ahaaneed iyo mid maamul, waxana mar walba ku xayn-daaban ammaan, aqoon sare, wakhti-dhawrid iyo shaqaale leh waxbarasho sare oo waayo-aragnimo ballaadhan iyo aqoonba u leh laxaadkaaga kala dhantaalan. Xiitaa caymisyadayadu waa qaar u habaysan si waafaqsan hawsha markaa jirta, shuruuddayada mushaharka iyo shaqadana si weyn ayey ula dhacsanyihiin adeegayaasha iyo loo adeegaha oo helaya adeege qanacsan oo faraxsan.
LSS Assistans waxad ka helaysaa:
– Xal guud oo waafaqsan baahiyahaaga gaarka ah iyo codsiyadaada quseeya wax kasta oo guriga gudihiisa ama debeddiisa ah.
– Booqasho guri marka aad soo codsato ka bacdi
– Wada shaqayn ka dhaxaysa degmada, landstinget-ka iyo qandaraasyelaasha gaarka ah
– Kayd shaqo-sugeyaal oo hawlaha shaqaalaysiinta ah si ay taageero u noqdaan marka shaqaale la´aani timaaddo
– Talobixin shakhsi ah iyo taageero xagga hay´adaha dawladda iyo xarumaha kale ee quseeya laxaadkaaga kala dhantaalan
– Caawimo dhinaca ah foomamka codsiga
Haddii aad qabto wax su´aalo ah, ku soo dhawoow in aad nagala soo xidhiidho telefoonkan: 031-83 36 50 ama warqad u soo dir info@lssassistans.se